Iqakamba laseNew Zealand ngokukhawuleza lurhoxisa ukhenketho lwasePakistan ngenxa yezokhuseleko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Sports » Iqakamba laseNew Zealand ngokukhawuleza lurhoxisa ukhenketho lwasePakistan ngenxa yezokhuseleko
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • iindaba • Iindaba zasePakistan • abantu • Xanduva • Safety • Sports • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ibhodi yeqakamba yasePakistan (i-PCB) ithe ukhenketho luye lwarhoxiswa "ngokungafaniyo" yi-NZC ngaphandle kwamalungiselelo okhuseleko angenamsebenzi awenzelwe uthotho, olwalungenxa yemidlalo emithathu ye-One Day International eRawalpindi kunye nee-T20 ezintlanu kwisixeko esisempuma Lahore.
Ukhenketho luye lwacinywa kwimizuzu ngaphambi komdlalo wokuqala weqela lasePakistan kwiminyaka elishumi elinesibhozo.
Iibhodi zeqakamba zasePakistan naseNew Zealand zithe umdlalo weRawalpindi urhoxisiwe ngenxa yesilumkiso sezokhuseleko.
Inkulumbuso yasePakistan uImran Khan uthethe nomlingane wakhe waseNew Zealand uJacinda Ardern ngolwe-Sihlanu ukumqinisekisa ngokhuseleko lweqela.
Iqela laseNew Zealand bekufanele lithathe iPakistan kumdlalo wayo wokuqala kumhlaba wasePakistan kangangeminyaka eli-18 kwidolophu yaseRawalpindi namhlanje, kodwa ukhenketho luye lwarhoxiswa kanye phambi kokuqala komdlalo wokuqala, ngenxa yemicimbi yezokhuseleko engachazwanga.
Ibala leqakamba laseRawalpindi
INew Zealand yeQakamba (NZC) -Ibhodi yezemidlalo kazwelonke-ngokungalindelekanga ikhuphe ingxelo isithi "iyalushiya" utyelelo ngenxa yokulumkisa kukhuseleko lukarhulumente kwimizuzu nje embalwa ngaphambi kokuqala komdlalo.
“Ukulandela ukwanda kukarhulumente waseNew Zealand kumanqanaba esoyikiso Phakistan, kunye neengcebiso ezivela kubacebisi bezokhuseleko be-NZC emhlabeni, kugqityiwe ukuba iBlack Caps ayizukuqhubeka nokhenketho, ”itshilo ingxelo yeQakamba eNew Zealand.
"I-PCB izimisele ukuqhubeka nemidlalo ecwangcisiweyo," yatsho ingxelo ye-PCB. "Nangona kunjalo, abathandi beqakamba ePakistan nakwihlabathi liphela bazakuphoxeka yile nto yokurhoxa ngomzuzu wokugqibela."
Umphathiswa wolwazi wasePakistan, ngelixesha, wathi iNkulumbuso yasePakistan uImran Khan uthethile nomlingane wakhe waseNew Zealand uJacinda Ardern ngolwe-Sihlanu ukumqinisekisa ngokhuseleko lweqela.
“Kungekudala, iNkulumbuso u-Imran Khan wayeqhakamshelana ne-Nkulumbuso yase-New Zealand kwaye wamqinisekisa ukuba iqela lase-New Zealand linikwa ukhuseleko olungekho semthethweni ePakistan, kwaye i-PCB ithe iqela lezokhuseleko lase-New Zealand nalo livakalise ukoneliseka amalungiselelo okhuseleko asePakistan, utshilo umphathiswa wolwazi uFawad Chaudhry.
"Iiarhente zethu zobuntlola ziphakathi kweenkqubo zobuntlola ezigqwesileyo emhlabeni kwaye ngokwazo iqela laseNew Zealand alijongananga nalo naluphi na uhlobo losoyikiso."
Kwingxelo, uMlawuli oyiNtloko weQakamba waseNew Zealand uDavid White uthe akunakwenzeka ukuqhubeka nokhenketho ngokunikwa ingcebiso kwezokhuseleko awayeyinikiwe.
NZC Ukwathi kwenziwe amalungiselelo okuba iqela leqakamba lamadoda laseNew Zealand lihambe Phakistan.
Eli nyathelo liza kubonwa njengesibetho kwimizamo yeBhodi yeQakamba yePakistan yokubuyisa iqakamba elipheleleyo lamazwe onke kunye namaqela onke abuyele ePakistan, emva kokuba iqela lelizwe lanyanzelwa ukuba lidlale elubhacweni iminyaka emithandathu kulandela uhlaselo lowe-2008 kwiqela leqakamba laseSri Lank Lahore.
Imibuzo ngoku isala malunga nokuba iqela lamadoda eqakamba laseNgilani liza kuqhubeka nezicwangciso zokhenketho lwasePakistan kwinyanga ezayo.
Iibhiliyoni ezingama-90 zeerandi ezingabizi kakhulu: Indlela engaphantsi kwendlela ihlekisa ngesiFrentshi ...
I-CDC ikhuphe umyalezo ongxamisekileyo kuwo nawuphi na umMelika ...